Mamiriro ezvinhu ekukweretesa zvakaringana muagro-maindasitiri akaomeswa anogona kunetswa - "Potato System" magazini
Mamiriro ezvinhu ekukweretesa akasarudzika mune agro-maindasitiri akaomarara anogona kunge akaomeswa
Iyo hombe vhoriyamu yezvisungo iri kumanikidza Bazi rezvekurima kuti riomese mamiriro ekupa yakasarudzika mari yekudyara zvikwereti. Bazi rinofunga kudzikisa mari yemubhadharo yakapihwa mari pazvikwereti zvakadaro kubva parizvino 90-100% kusvika pa80%. Vatori vechikamu mumusika wekurima vane chivimbo chekuti chirongwa ichi chinozokanganisa mhando dzehupfumi dzemabhizinesi, kutyisidzira kukanganisa mapurojekiti ekudyara uye kuwedzera mitengo yezvokudya.
Bazi rezvekurima rakaburitsa gwaro rekugadzirisa, iro rinopa kudzikiswa kwehuwandu hwezvibatsiro zvemari yemubereko pazvikwereti zvekudyara zvichibva kubva ku1-90% kusvika ku100% kubva munaGunyana 80. Sezvakataurwa mutsananguro yekutsanangurira gwaro, chiyero chinodikanwa nekuda kwehuwandu hwakawanda hwezvisungo zvinofungidzirwa uye kuwedzerwa kwezvikwereti zvakapedzwa kare zvichitarisana nekudzikira kwekugoverwa kwebhajeti kwegore rino kubva pamabhirioni 90,88. kusvika pamabhiriyoni makumi masere makumi maviri nemaviri. Kukurukurirana kwegwaro kunogara kusvika Chikunguru 80,22.
Sekureva kwedata, mabhanga airatidza kusagutsikana kwavo nechirongwa ichi pavanenge vachikurukura chirongwa ichi kunzvimbo ye Ministry of Agriculture muna Chikunguru 14. Izvo zvakacherechedzwa ipapo kuti shanduko yemari yemubereko pasi pezvibvumirano zviripo inotyisidzira kusakwana kune vanoverengeka vevakwereta, uye mamwe mabhanga akayambira nezve kumisa kuburitswa kwezvikwereti zvitsva. VTB, ine portfolio yemari yekudyara yezvinomera zveindasitiri inodarika 127 bhirioni, yakavimbisa kuti mamiriro azvino echirongwa haapi mukana wekuwedzera mwero. Sarudzo yakanakisa ndeyekuunza mitemo mitsva chete pazvibvumirano zvitsva, sezvo kuchinjirwa kuzvibvumirano zviripo kunogona kukanganisa maitiro ezvekurima, anodaro VTB. Rosselkhozbank uye Gazprombank havana kupindura mibvunzo, Sberbank yakaramba kutaura.
Iwo maindasitiri emubatanidzwa ane chivimbo chekuti mabhangi achawana nzira yekuchinjisa iro rekuwedzera mutoro kune vanokwereta. Mukuru weNational Meat Association, Sergei Yushin, anoti izvi zvinotyisidzira vatori vechikamu vemaindasitiri nemitengo yegore rose inosvika mazana maviri emamiruble. anosvika 200 bhiriyoni rubles. mugore. Sekureva kwake, pakanangana neshure rekukura mumutengo wekugadzira, mabhizinesi anogona kusunga mapurojekiti ekudyara, zvinoreva kuti mumakore mashoma indasitiri ichamira. Director weFruit and Vegetable Union Mikhail Glushkov anoti varimi chete vema greenhouse miriwo vane zvikwereti zvakadaro - mazana matatu emabhirioni, uye chikumbiro cheBazi rezvekurima chinogona kuwedzera mutengo wekuvashandira nemabhirioni maviri. mugore. Mari dzekushandisa dzave kutokura, chete muna1 mukana we greenhouse yemuriwo wekurima wakadzikira nehafu, uye mari yekuwedzera inotyisidzira kubhuroka kwemabhizinesi, anodaro.
Bazi rezvekurima rakavimbisa kuti mazwi ekukweretesa, kunyanya chimbadzo, pazvikwereti zviripo hazvichinje. Asi, sekureva kwedhata, nekudzikira kwemitero inodzikira kusvika ku80% yezvibvumirano zvakagadziriswa mushure maGunyana 1, Ministry of Agriculture inogona kunge isina mari yakakwana yezvirongwa zvitsva zvekudyara. Imwe yemabhangi inofunga kuti zvinokwanisika kuramba kutsigira mapurojekiti matsva uko kuzvigutsa kwepamusoro kwakawanikwa kana kune purofiti yakanaka, pasina kushandura mamiriro ari pasi pezvibvumirano zviripo. Sergei Yushin anobvuma kuti zvinokwanisika kudzikisa rubatsiro rwezvikwereti zvenguva yemberi uye ipapo varimi vanozoita sarudzo nezve kutora chikamu muzvirongwa zvitsva zvine mamiriro anozivikanwa.
Source: Frutinfo yakavakirwa paKommersant zvinhu
Tags: kukweretesa kwakawandaMinistry of Agriculture yeRussian Federation
Tinokukoka iwe kuwebhu webhu yePatato Union